Soo iibso Boho A-line dhexda sare ee xargaha xargaha-sare ee Maxi Skirt - Rarista bilaashka ah & Canshuur la'aan | WoopShop®
Color Boor White Red Blue
Beige / S Boor / L Boor / M White / S Red / XL White / L White / M White / XL Blue / S Beige / XL Blue / L Blue / M Red / S Blue / XL Red / L Red / M
Boho A-Line Dhexda Sare ee Xarigga Xarig-Jeex Maxi Skirt-Beige / S gadaal baa laga keenay oo markab sida ugu dhaqsaha badan ayuu u soo noqonayaa markuu kaydka ku soo noqdo
Nambarka Model: G205SK1380
Qaabka: Goono la qurxiyey, Boho Elastic dhexda Maxi Skirt/Maro buuxa/Goono dhaadheer oo dumarka ah
Xusuusin: Fadlan si adag u raac jaantuska cabbirka si aad u doorato cabbirka. Ha ku xulin si toos ah hab dhaqankaaga. Wali ma hubo cabirka? Waxaan jeclaan lahayn inaan kugula talinno adiga oo ku saleynaya cabirkaaga buska, dhexda, iyo sinta. Cabirku wuxuu yeelan karaa kala duwanaansho 2-3cm sababtoo ah cabirka gacanta. Fadlan la soco markaad cabireyso Soo jeedinta gacmo-dhaqashada biyaha qabow. Waxay kaa caawin kartaa alaabtu inay qaabkooda ilaashadaan.
Xaaladdan oo kale, waad ku mahadsan tahay!
Adeegga macaamiishu wuxuu ahaa mid aad u wanaagsan. Waxay qaadatay in ka badan hal bil in goonnada ay timaaddo laakiin waxaan filayaa inay taasi tahay sababta xannibaadaha Covid iwm. OMG! Runtii waan jeclahay goonnada! Aad bay u qurux badan tahay. Si fiican ugu habboon Qalabka waa weyn yahay! Aad bay ugu talinayaan iibsashada mid.
Waxay u egtahay mid wanaagsan, lagu taliyay.
Goono midab leh oo qurux badan, si fiican loo sameeyay. Cabbirku waa yar yahay sidaa darteed dalbo cabbir ka weyn
Qurux badan, shaqo fiican